​बैठकमा राखियो डरलाग्दो बँुदा « Jana Aastha News Online
​बैठकमा राखियो डरलाग्दो बँुदा
प्रकाशित मिति : १५ भाद्र २०७४, बिहीबार ११:३६
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले अपचारार्थ ब्यांककमा छन् तैपनि उनको अनुपस्थितिमा आइतबार स्थायी समिति बैठक बस्यो । उपाध्यक्ष भीम रावलले निकै चाखलाग्दो कुरा सुनाए, ‘मलाई सेनाका जर्नेलहरूले भनेको, हाम्रो सीमामा एकीकृत भन्सार पोस्ट (आइसिपी) राख्ने, त्यहाँ भारतीय सेना तैनाथ गर्ने कुरा छ । यो डरलाग्दो विषय हो । यसको विरोध गर्नुपर्छ ।’
प्रतिवादमा उपमहासचिव विष्णु पौडेल तुरुन्तै उत्रिए, ‘कसले मनमा के कुरा राख्यो, के शंका ग¥यो, के सोच्यो त्यो आधारमा होइन, सार्वजनिक भएको दस्ताबेजको आधिकारिकता हेरेर मात्र प्रतिक्रिया दिनुपर्छ । कसले, कोसँग के भन्यो त्यसको आधारमा चल्नुहुँदैन । के दुई देशको संयुक्त विज्ञप्तिमा यस्तो कुरा छ ? सामान्यतया ६ किलोमिटर वरपर मात्र सेना बस्ने हो । हाम्रो र उनीहरूको दुवैतिर बोर्डरमा बस्ने सशस्त्र प्रहरी बल नै हो । कतै लिखित रूपमा भेटियो भने बेग्लै कुरा, नत्र हल्का टिप्पणी गर्नु हुँदैन ।’ दिल्ली यात्रामा जल डुबान, कटानबारे ठोस कुरा गर्नुपथ्र्याे त्यो भएन भन्ने चर्चा पनि चल्यो । काँकडभिट्टाको जस्तै गरी विराटनगर, वीरगञ्जमा पनि भारतीयहरू बस्न खोजेकोबारे समेत भीम रावलले चर्चा गरे । कोशी हाइड्याम बनाउने बहानामा त्यसको डिपीआर गर्न भन्दै विराटनगरमा क्याम्प खडा गरेर भारतीयको एउटा जत्था बसेको वर्षौं भइसक्यो । काम केही भएको छैन, उसले अड्डा छाडेको पनि छैन । रेल्वेको कुरा आउँदा कनेक्टिभिटी ल्याउँछ भने त्यो राम्रो हो, स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि व्यक्त भयो । विरोधको नाममा विरोध नगरौं भन्ने कुरा आयो ।
विगतमा राजदूत राकेश सुदले गरेको एउटा कुराको पनि प्रसंग उठ्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेट्न जाँदा उनले भनेका रहेछन्– उफ्, किस हालमें फँसगए हम ! किस मुसिबत में पड्गए हम, अभि तो ऐसा हाल है, जब संघीयता लागु होगा तो कैसा बुरा हाल होगा हमारा ? त्यहाँ चर्चा भएअनुसार यस्तै अगष्ट र सेप्टेम्बरमा उनले त्यो दुखेसो गर्नुको कारणचाहिँ कहिले लिम्बुवान त कहिले माओवादी, कहिले कुन मोर्चा त कहिले युवादस्ताले चन्दा र ठेक्का माग्दै कार्यालयमा ६÷७ वटा तालाबन्दी गरेर हैरान पारेका रहेछन् । तर, अहिले त्यो स्थिति छैन । अनेक निहुँ बनाएर अझै बसेको बस्यै छ । यो सबै कुरा भएपछि एमालेको सो बैठकले विरोधको नाममा विरोध होइन कि आफ्ना कुरा राखौं, देउवाले बोल्नु नहुने कुरा बोलेकोमा आपत्ति जनाऊँ भन्दै विज्ञप्ति निकालेको बैठकमा सहभागी स्रोत बताउँछ ।